Waraanaa Tigraay: Labsiin kophaatti dhukaasa dhaabuu ‘marsuudha’ jedhamuufi deebii Itoophiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaraanaa Tigraay: Labsiin kophaatti dhukaasa dhaabuu ‘marsuudha’ jedhamuufi deebii Itoophiyaa
Labsii kophaatti dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayiitti labse ‘marsuudha’ akkasumas motummaan beela uumaa jira jechuun akeekkachiisa Gamtaan Awurooppaa baasee, Itoophiyaan kufaa goote.
(bbc)–Gamtaan Awuroppaa Itoophiyaan kan labsite ”dhukaasa dhaabuu osoo hintaane marsuudha, beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti,” jechuun Komishinarri Dhimmoota Balaa Jaaneez Leenaarchiik ibsa paarlaamaa gamtichaatiif kennaniin qeeqaniiru.
Imbaasiin Itoophiyaa Biraasalsiitti argamu ammoo haasaa komishinarichaan kan nama gaddisiisuu jechuun, tooftaa marsuuti jedhus kuffisuu ibsa Adooleessa 7, 2021 baaseen ibseera.
Komishinarichi, ”Motummaan Itoophiyaa bu’uuraale misoomaa adda addaa diiguun, karaawwan bahiinsaa cufuun beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira jechuunsaanii dhugaa lafarra jiru hubannoo keessa osoo hin galchine himannaawwan bu’ura hinqabne mootummaarratti dhiyeessuu filataniidha,” jedheera.
Komishinarichi kana kan dubbatan Adooleessa 6, 2021 yoo ta’u, haasaan isaanii kunis barruu gamtichaa ‘EU Observer’ irratti mata duree ”Itoophiyaan Tigraayiitti beela umaa jirraachu EU’n akeekkachiise” jedhuun maxxanfameeera.
Mootummaan Itoophiyaa maal jedhe?
Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin naannoo Tigraayiitti beelli akka hin umamneef hojjataa turuu himun, deeggarsa marroo lamaan taasifameenis dhaabbileen deeggarsaa namoota rakkinaaf saaxilaman keessaa harka 70 gahu akka danda’an ibsuun, labsii dhukaasa dhaabuu amma mootummaan labse kaayyoowwan kanneen fiixaan baasuuf caalaa kan gargaaruudha jedheera ibsa baasee turen.
Kutannoo motummaan federaalaa qabuun walqabatees qaamoolee naannichatti deeggarsa namoomaa taasisuuf barbaadaniif hayyama balaliinsaa kennu ibsuunsaa ni yaadatama.
Komishinarichi gama isaanitiin gochaan motummaan raawwataa jiru ”marsuudha” jechuu yoo ibsan, ”motummaan daangaalee Tigraay cufuu, balaliisawwan qilleensaa dhorkuu, daandiifi bu’uraalee misoomaa barbadeessuu, tajaajila telekomunikeeshinii adda kutuu fi hojjattoonni deeggarsaa idil-addunyaa akka hingallee dhurku” eeraniiru.
”Tigraayiitti ammaan tanatti jiraattoonni kuma 900 beela’aniiru. Jiraattoonni miliyoona tokko kan biraa ammoo qarqara beelaarratti argamu. Beelichi nam- tolcheedha. Qaama beelichaaf itti gaafatamaa ta’eefis qaaniidha,” jedhan.
Imbaasichiifi Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa waliin toora miidiyaa hawaasaa isaarratti ibsa baasaniin, labsiin dhukaasa dhaabuu qonnaan bultoonni waqtii roobaatti akka qotaniifi haala deeggarsa namoomaatiin walqabateen hojiirra haa ooluu jechuun gaaffii bulchiinsi yeroo naannichaa dhiyeesseef deebii kan kenneedha jedheera.
Duula waraanaa Tigraayiitti tureen hawaasa idil-addunyaa dabalatee dhaabbileen deeggarsaafi qaamooleen garaagaraa jalqabamurraa kaasuun naannoo Tigraayiitti waamicha dhukaasa dhaabuu taasisaa kan turan ta’u kaasuun, Komishiniin Awuurooppaas ibsa Tigraay ilaalchisuun baaseen dhukaasni akka dhaabbatuuf waamicha taasisaa ture jedheera ibsi kun.
Itoophiyaan kophaatti wayita dhukaasa dhaabuu labsitetti, waamicha biyya keessa tureef deebii kennuuf qofaa osoo hintaane, deeggartoota keessattuu waamichawwan irra deddebiin Gamtaa Awurooppaatiin taasifamaniifis deebii akka ta’e eeruun, kuni tarkaanfii kallattii sirriin fudhatame waan ta’eef dinqisiifamu qabaata jette jirti.
”Murtee gaarii madaallii kamiinuu humna agarsiisuurra namootaaf dursa kennedha,” jedheera ibsichi ejjannoo mootummaa Itoophiyaa.
Fallaa kanaan ammoo TPLF fiixaan bahiinsa galmawwan kanneenii gufachiisuu waan danda’ameef hunda raawwataa tureera kan jedhe ibsichi, kanaafis akka fakkeenyaatti kan kaasee waamicha dhukaasa dhaabuu namoomaa fudhachuu diduu isaatiin alatti daangaa irratti loltoota walitti qabaa jiras jedheera.
Kana malees riqichawwan naannoolee ollaatiin walitti fidan diigeera akkasumas Amaaraa fi Ertiraa irratti waraana banuuf dhaadateera jedheera. Komiinis jeequmsawwan TPLF kanneen irratti ta’u qabaata tures jedheera.
UNtti Qindeessaan Dhimmoota Namoomaa (OCHA) gama isaatiin riqichi Takazee kan Gondarii fi Shiree walquunnamsiisuu Adooleessa 2, 2021tti humnootii Addaa Amaaraatiin tajaajiilaan ala taasifamu ragaalee agarsiisan akka qabu himuunsaa ni yaadatama.
TPLF ammoo dhukaasa dhaabuu waliigalteerra gahame kan fudhatu ta’uu kan beeksiise yoo ta’u, haaldureewwan kaa’e torba keessaa tokko loltoonnii Amaaraafi Ertiraa naannicha keessaa bahanii bakka waraanaan dura turaniitti akka deebii’an kan gaafatu ni argama.
Baatiiwwan darban keessa waraana ture hordoofee sarbamni mirgaa naannicha keessatti raawwatamaniiru jedhaman qaama walabaatiin akka qorataman akkasumas telekom, ibsaa fi balaliinsa xiyyaaraa dabalatee tajaajilliwwan misoomni bu’uuraa adda citan hundi akka eegalchiifaman gaafateera.
Ibsi gama Itoophiyaatiin kenname kunis, yaa’ii gamtichaarratti kan komishinaachaa jedhamee akkasumas miidhaa himannaawwan dhiheenya kana ammoo ergamaa addaa Peekaa Haaviistoo mootummaa Itoophiyaa irratti kaasan hir’isuuf kan fayyadu miti jedheera.
Ministirri Dhimma Alaa Fiilaandiifi ergamaan Addaa Gamtaa Awurooppaa Peekaa Haaviistoo ”Guraandhala keessaa aanga’oota olaanoo Itoophiyaan wayita wal arganii turaniitti jechi isaan fayyadamaa turan uummata ‘Tigraay akka balleessan, waggoota 100 dhufanitti uummata Tigraay guutummaatti akka haxaa’an kan fakkaatuudha’ jechuun dubbachunsaanii ni yaadatama.
Ministeerri Dhimma Alaa gama isaatiin, ”Kuni kan ittigaafatamummaa hinqabneedha, gonkumaa dhara, akkasumas kan daandii dippilomaasii hordofee miti,” jechuun ibsi ergamichaa kaayyoo dhokataa kan qabu dha jedhee ture.
Deeggartoonni Itoophiyaas haalicha sirriin hubachuun bal’ina rakkoolee wayita biyyattii yaaliiwwan furmaataa taasiftuutti mudatan hubachuun, tarkaanfiiwwan fudhatamaniif beekkamti kennu qabus jedheera ibsichi.
Gamtichi gama isaatiin waliigaltee nagaa akka taasifamuu fi haalli dhiyeessii deeggarsa namoomaa akka fooyya’uuf ergamaa addaa fi Ministira Dhimma Alaa Finlaand Peekaa Haaviistoo gara Itoophiyaatti erguu yaadachuun, dowwannaan erga ammaa bu’aa omaatu hinargamsiifne jedheera.
Komishinichis walitti bu’insichaan yakki waraanaa ykn yakkoonni akka namoomaa irratti raawwatamaniitti lakkaa’aman kan akka guddeeddii, sarbamni ajjeechaa akkuma barbaadanii ilaalusaa kaaseera.
Ammatti waraanni naannichaatti hir’achukan himani miseensi gamtichaafi Ministirri Dhimma Alaa Silooveeniyaa, Mr Anzee Logaarii gama isaanitiin, humnootiin raayyaa Itoophiyaa eddoowwan baayyee keessaa akka bahaniifi humnootiin Eritraas gama daangaa Ertiraatti deebii’u kaasaniiru.
Ammatti motummaan federaalaa fi milishaan Naannoo Amaaraa waliin ta’uun Lixa Tigraay keessatti akka rgaman dubbataniiru.
Haata’u malee baatiiwwan saddeetiin booda ummanni naannichaa harki 91 ”deeggarsa atattamaa barbaachisa” jechuun ”qaamoolee hundi dhukaasa dhaabuu guutuu gochu qabu” jedheera.
Gamtaan Awuurooppaa deeggarsa bajattaa kallattiin Itoophiyaaf taasisuu kan dhorke yoo ta’u, lakkoofsa aanga’oota hojjattoota deeggarsaa danqanis galmee gurraacha keessan galcha jechuun akeekkachiisuu gabaasa barruun ‘EU Observer’ baaseen himeera.
Gamtichi buqaatoota daangaa qaxxaamuruun gara Sudaan seenaniif baasii paawundii miiliyoona 118 taasisuu komishinarichi kaasaniiru.Waraana Sadaasa 2020 motummaa federaalaa fi humnootii TPLF jiduutti gaggeeffameen lammiileen nagaa kumaatamaan lakkaa’aman fii loltoonni adda hinbaafamne du’aniiru.
Torban darbe keessa motummaan loltoota isaa Maqalee keessaa baasuu ibsulleen humnootiin TPLF ammoo humnaan qabachu dubbatu.
MM Abiya Ahimad dhukaasa dhaabuu addatti labsuun, sababiin itti loltoonni Maqaleedhaa bahan yaaddoon eeddoowwan biraa waan jiraniifi Maqalee ammoo jidduugala xiyyeefaannoo waan hintaaneef jedhanii ture.
Gama biraatiin ammoo TPLF ibsa guyyaa Dilbataa baaseen, waliigaltee dhukaasaa dhaabuu gochuuf haaldureewwan torba kaa’ulleen gama motummaaniin deebiin hanga ammaatti kenname omtu hinjiru.
Raashiyaan Itoophiyaa qaanessite #NEWS Miidiyaan Raashiyaa,RT suuraa Abiy Ahmed fi Isayyaas Afawarqii "WAR CRIMINALS" dhaadannoo…
Deebii Marroon Leencoo Lataatiif Kenne!! "Ni Yaadattu yoo ta'e Gaaffiifi Deebii Prime Media taasise irratti…
Godaantonni Itoophiyaa 814 Jabuutii Irraa Deebifaman WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)----Lammiwwan Itiyoophiyaa 814, kanneen mootummaan Jabuutii…
Breaking News: ‘Tigray Force’ released a live war between them and Military.